Isabelo esishushu.Indlela yokwabelana ngeefayile zemultimedia phantse ngaphandle kwemida. | Iindaba zeGajethi
EKukho inani elikhulu lamaphepha anikezela ngeenkonzo zokugcina iifayile ezinkulu ezinje ngeMegaUpload okanye iRipidShare, ukubiza ezona zaziwayo, kodwa zilinganiselwe bubungakanani bokulayisha kwaye ngakumbi umda kwinani lokukhuphela. Ukuba sifuna ukunyusa ezi zibonelelo kwezi nkonzo kufuneka sihlawule umrhumo wokufikelela kwiakhawunti yepremiyamu ngokusikelwa umda okumbalwa. Kodwa isabelo esishushu siye savela kuloo ndawo! iphepha elitsha apho unokwabelana ngeefayile ukuya kuthi ga kwi-megabytes ezingama-200 ngaphandle komda wokulayisha okanye wokukhuphela. Andazi ukuba baya kukwazi ukunyamezela ixesha elingakanani na ngesingqisho ngaphandle kokubiza ipeni kodwa okwangoku le nto injengale:
Ukugcina mahala Zonke iintlobo zeefayile.
Ii-megabyte ezili-200 ubuninzi bobukhulu kwifayile nganye
isono Umda wokukhuphela
isono layisha umda
Ngeeseva ngokukhawuleza okukhulu
BEwe ngale leta ikhawulezayo, bekungekho enye indlela ngaphandle kokubonisa ukuba ingaba into abayithembisileyo iyinyani na kwaye sisiphumo:
Ukulayisha ifayile ngolwandiso lweRAR yee-megabyte ezili-197 kuthathe ngaphezulu kweeyure ezimbini kwaye inyani kukuba kukude kakhulu ukuba ulinde, nangona ungangxamanga akulunganga nako. Kodwa uncedo olukhulu kukuba neefayile ezincinci ezinjengeefoto, iaudiyo, njl. Njl. Ezilayisha ngokukhawuleza okukhulu. Ukongeza, akukho mfuneko yokwenza iakhawunti ukuze ulayishe okanye ukhuphele iifayile kwaye iifayile ozilayishayo zinokwenziwa zabucala okanye ezasesidlangalaleni ukuze ibe ngabahlobo bakho kuphela obabonelela ngekhonkco abanokuzikhuphelela okanye bavumele wonke umntu ukuba abone okufakileyo. zikhuphelele. Ukuba ikuqinisekisile isabelo esishushu Uya kuba nomdla wokufunda le khokelo ilandelayo ngendlela yokulayisha kunye nokwabelana ngeefayile (iividiyo, iifoto, iimuvi, umculo kunye neefayile) ngesabelo esishushu.
1) Intloko kwisabelo esishushu! kwaye ufunde iimeko zokusetyenziswa. Sele uyazi ukuba ukusebenzisa olu hlobo lwenkonzo kuya kufuneka uyazi kwaye uyamkele imiqathango yenkonzo, phakathi kwayo apho ungafuneki ukuba ulayishe izinto ezinamalungelo obunini okanye amalungelo obunini okanye anokuba lulwaphulo-mthetho. Into yakhe kukusebenzisa iSabelo eshushu! ukufaka iifoto zakho kunye neevidiyo zasekhaya kwaye wabelane ngazo nabahlobo bakho okanye nehlabathi liphela simahla.
2) Ukuba uthatha isigqibo sokuqhubeka nokusebenzisa isabelo esishushu! Masibone indlela yokufaka ifayile yethu yokuqala, eya kuba ngumfanekiso. Ukwenza oku, cofa kwindawo ethi "Khangela incwadi" kwaye i "Layisha ifayile" iya kuvula. Khangela i-hard drive yakho ukuze uyilayishe umfanekiso kwaye xa uyifumana cofa ku «Vula».
3) Ngoku nqakraza kwiqhosha «layisha ngoku!» kwaye ifayile iya kuqala ukulayisha. Yiba nomonde ngokuxhomekeka kubungakanani bezo uzifakayo, kuya kuthatha ngaphezulu okanye kancinci.
4) Xa ugqibile ukulayisha umfanekiso, uza kubona isikrini ngolu hlobo lulandelayo:
Masiqwalasele ngokusondeleyo ukuba loluphi ukhetho olukhethiweyo ukuze ukwazi ukumisela ngokupheleleyo ukhuphelo lwakho. Kwisithathu esiphezulu somfanekiso sinekhonkco lokukhuphela apha ngezantsi apho ithi «Khuphela ikhonkco». Ke apho ithi "Ikhowudi yokuSusa" sinekhowudi esiya kuyidinga ukucima ulayisho ukuba sithatha isigqibo sokuba asifuni ukuba sihlale sisingathiwe. Apha ngezantsi kukho i-thumbnail yomfanekiso olayishiwe kwaye ecaleni kwawo sinothotho lweekhonkco esinokuzifaka kwiiforamu, iibhloko kunye neewebhusayithi.
Embindini sineendlela ezimbini onokukhetha kuzo, eyokuqala kukufaka idilesi ye-imeyile ukuze ufumane i-imeyile nalo lonke ulwazi onalo ngoku kwiphepha, oko kukuthi, uya kuba ne-imeyile kwikhonkco lokukhuphela, i ikhowudi yokucima ifayile kwaye awuzukuyibhala phantsi yonke ngesandla. Ngapha koko, ukuba awunamdla, musa ukubeka nayiphi na i-imeyile kwaye weqe eli candelo. Inketho yesibini kukubhala iidilesi zemeyile zabahlobo bakho ezahlulwe zizikhewu ukubathumela ikhonkco lokukhuphela. Unokongeza ingxelo ukuze xa befumana i-imeyile bazi ukuba imalunga nantoni kwaye ngubani oyithumileyo. Kuzo zombini iimeko, xa usenza isigqibo, cofa ku "Thumela!" ukuthumela iiposi.
Ekugqibeleni, kwisithathu esisezantsi sephepha, sinokukhetha ukwenza ukulayishwa kwethu esidlangalaleni ngokugcina isigxina umfanekiso kwisabelo! Ukuba ufuna ukuyenza ngolu hlobo, kuya kufuneka unike igama ulilayishe, ukhethe udidi kwaye ufake idilesi ye-imeyile. Kuya kufuneka ubhale nenkcazo emfutshane malunga nefayile efakiweyo. Xa yonke into uyizalisile, cofa kwiqhosha «YABelane NGAYO!» kwaye uya kuyigcina ifayile yakho ngokungenammiselo kwiseva Yabelana ngayo.
Kulo mfanekiso wokugqibela sinokubona emazantsi indlela abasikhumbuza ngayo ukuba sinoxanduva lokulayisha kwaye akufuneki sophule amalungelo obunini.
CNgale nto siyigqibileyo kwaye kuya kufuneka uhambe phakathi kwamacandelo ahlukeneyo esabelo esishushu! ukubona iifayile ezilayishwe ngabanye abantu kwaye ubone ukuba unomdla wokukhuphela nayiphi na. Ndiyathemba ukuba eli nyathelo ngenyathelo lesifundo kwisabelo esishushu siluncedo kuwe. Kungekudala ndiza kubuya namaphepha amaninzi okulayisha ukuze ube nokugcina ivenkile yakho kwi-intanethi. Imibuliso yesidiliya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Isabelo esishushu.Indlela yokwabelana ngeefayile zemultimedia phantse ngaphandle kwemida.
Molo Vini ations Siyavuyisana nebhlog yakho kwaye enkosi ngezinto ezinkulu osifumanisayo. Ngokuphathelene nesabelo eshushu, ndizamile nje kwaye ndinamathandabuzo kwinxalenye yokugqibela.
Inxalenye yokugqibela imele ukuba ikhethe ukwenza ifayile esidlangalaleni, kodwa ukuba awugcwalisi amasimi xa ucofa kwi-SHARE IT, ayiphenduli.
Kwelinye icala, kuthetha ntoni ukuba uyigcwalisile, iya kugcinwa "ngokusisigxina"? Ukuba awuyigcwalisi KUNYE / okanye awuyenzi ibe sesidlangalaleni, ngaba iyaphelelwa emva kwethutyana? Yimalini?
Okokugqibela, yithi ndigqibile ukushiya isikrini ngokusivala ngokulula kwaye ndiqinisekisile ukuba amakhonkco ayasebenza.
Konke kucociwe, enkosi.
Hola Pedro Enkosi ngengcaciso yakho. Jonga mhlawumbi okokufundisa kukude kwaye yiyo loo nto bekudidekile, kodwa ndiza kukucacisela.
1º) Awudingi ukucofa i-SHARE IT, kufuneka ucofe nje eli qhosha ukuba ufuna ukuligcina ngokusisigxina kwiiseva ezitshisayo. Ngokufanelekileyo ukuba ufuna ukwenza oku kuya kufuneka ugcwalise imihlaba yenxalenye yokugqibela kwaye ukuba awuyigcwalisi ayigcinwanga ngokusisigxina.
2) Okwangoku xa ulayisha ifayile, sele unawo amakhonkco okhuphelo afumanekayo kwiscreen, ke awunayo enye into onokuyibhala phantsi ukuze ukhuphele nanini na ufuna. Enye into kukuba ufuna ukugcina amakhonkco kwi-imeyile okanye ubathumele kubahlobo bakho, emva koko kuya kufuneka ugcwalise amasimi ahambelanayo kwaye ucofe kwi-SEND IT!.
Okwesithathu) Ukuba awuyenzi i-SHARE IT, Oko kukuthi, awugcini iifayile ngokusisigxina, ukuba awuzikhupheli kwiintsuku ezingama-3, akukho mntu uya kucinywa. Ukuba wenza i-SHARE IT kufanele ukuba bahlale 'ngokusisigxina' njengoko besitsho, sukuyithemba le nto kakhulu.
Ndiyathemba ukuba yonke into icacile kuwe. Ukubulisa.
STUPENDO NDIYAYITHANDA ..
NDIFUMANELE IINKCUKACHA EZIBALULEKILEYO, NDANDIFUNDE NGEEFOMU EZI-10 KODWA AKUKHO MNTU UCHAZELEKILEYO UKUBA KUFUNEKA UKWENZE IFOTO KWIPHEPHA LWE-INTHANETHI, NJENGE-HI5, FACEBOOK NJL. … .NONKE SINOMBULELO
Ulwazi olukhulu enkosi ngegalelo lakho ndonwabe kakhulu
Iingcebiso ezilungileyo kakhulu ziluncedo kakhulu, enkosi
UMauricio Paz sitsho
Wamkelekile ku HotShare! Ungalayisha nayiphi na ifayile!
Nceda ukhethe ifayile ofuna ukuyifaka!
Fumana ikhonkco lokukhuphela kwaye wabelane ngalo
Ukulayisha simahla kunye nokuNgena ngokuNgenamkhawulo! (Max 2GB kwifayile nganye!) 2010
Sawubona iviniga: Ndikwingxaki yokuba ungawufaka njani umfanekiso kwisiginitsha ye-hotmail yam, ndiyaqonda ukuba kukho inyathelo ekufuneka ulayishe kulo mfanekiso kwisayithi, bendilwenzile uvavanyo kodwa ngalo lonke ixesha ndithumela imeyile, kwisithuba somfanekiso ubona kuphela ibhokisi engenanto.
Ndingaluvuyela ukhokelo lwakho malunga noku.
Jonga, uzakwenza oku kulandelayo, isebenzele mna.
vula i-facebook yakho kunye ne-imeyile yakho apho isayinwe khona
emva koko uye kufacebook ubeka iprofayile yomfanekiso uyitsalela kwibhokisi ye-hotmail apho ithi utyikityo
kwaye xa utsala umfanekiso, ungena ebhokisini apho uthi utyikityo
ukhulula imouse kunye nemifanekiso yomfanekiso
kwaye voila, gcina kunye ne-voila
Ndiyathemba ukuba iyandisebenzela, isebenze nge-100%